Madaxa boliiska oo ka tallaabsaday xeerka xogta ammaanka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Madaxa ciidanka ammaanka Dan Eliasson iyo kombiyuutarro. sawir: TT
Madaxa boliiska oo ka tallaabsaday xeerka xogta ammaanka
MUST: Xaq uma aanay lahayn in xeerka laga tallaabsado
La cusbooneeyay onsdag 6 september 2017 kl 11.05
La daabacay onsdag 6 september 2017 kl 09.17
Laanta wararka Ekot iyo laanta P4 Stockholm ayaa shaaca ka qaadey inuu taliyaha sare ee ciidanka ammaanka Dan Eliasson si aan xeerka waafaqsanayn go’aan uga gaaray inuu gacanta u geliyo shirkad gaar loo leeyahay war-bixinno la xiriira xogta sirta ee howl wadeennada ciidanka ammaanka iyo nidaamka mushaarooyinka.
Ma ahayn tallaabo loo baahnaa in sidaa loo maareeyo, sida ay sheegtay madaxa laanta ammaanka ee nidaamka IT-ga ciidammada nabad sugidda ee ciidanka difaaca oo magacooda loo soo gaabiyo, MUST.
–Waxaan kaliya oon oran karaa, inay xaqiiqdii ahayd nasiib-darro.
Khatar intee le’eg bay leedahay?
–Waxaa halis loo geleyaa inay xogtu gacanta u gasho cid kale oo ka faa’iideysata.
Howl-wadeennada ciidanka ammaanka iyo habka mushaarooyinka ee lagu magacaabo Palasso, ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay wadnaha howlaha ciidanka ammaanka oo ciddii suurtagal u hesha xogtaa ay sawir buuxa ka helayso dhammaan hab socodka howlaha ciidanka ammaanka.
Marka laga yimaado magaca, tobanka lambar iyo mushaarooyinka waxaa kaloo nidaamkaa laga helaa xogta qaraabada ugu dhow ee howl-wadeennada illaa iyo ilmahooda. Waxaa kaloo laga ogaan karaa halka uu howl-wadeenka ciidanka ammaanku u socdaal tagay, darajooyinkooda iyo jadwalka ey ku shaqeeyaan howl-wadeennada ciidanka ammaanku.
Nidaamka diwaanka ee howl-wadeennada iyo mushaarooyinka ciidanka ammaanka waxaa gacanta ku hayay ciidanka ammaanka laga soo bilaabo sannadihii sagaashameeyadii. Oo maadaama ay xogahaasi ku summadeey-san yihiin ammaanka qaranka , ayay maaraynta howlahooda gacan ku hayeen ku sugnaayeen xarummaha ciidanka ammaanka.
Hase yeeshee xilligii guga ee sannadkii 2015 ay ciidanka ammaanka u caddaatay in aanu ku fillayn maareeynta howlaha howl-wadeennada ciidanka ammaanka iyo mushaarooyinkooda. Hayadda ayaa uga baahatay shirkad mulki loo leeyahay taageero, shirkadda kandeeska ee lagu magacaabo CGI, ee mulkida u leh nidaamka Palasso. Haddii kale uu nidaamku halis ugu jiray bur bur.
Xal ayaa loo arkay inay shirkadda CGI ay gacanta ku dhigto oo kaga howl-gasho xogtii howl-wadeennada iyo mushaarooyinka ciidanka ammaanka meel ka bax-san xarrumaha boliiska.
Sidaa daraadeed ayaa loo baahnaa maadaama howlahani loo aqoon-san yahay xog sireed qaran, in war-bixinnada ey is dhaafsanayeen ciidanka ammaanka iyo shirkadda laga dhigo xog aanay akhrin karin cid aan xaq u lahayn (in la koodeeyo) iyada oo loo adeegsaneyo nidaam ogolaansho ka haysta wasaaradda difaaca. Middaasina oo ku cad qaraarka (nidaamka) difaaca ammaanka.
Hase yeeshee, si loo xafido dhaqaale, isla-markaana wakhtiga looga faa’iido wuxuu madaxa ciidanka ammaanka Dan Eliasson, xilligii guga 2015 uu go’aan ku qaatay inuu falkan ka reebo qaraarka ilaalinta ammaanka – oo ka dhigan in la dhinac maro nidaamkii sireeynta xogta ee wasaaradda difaaca.
Hase yeeshee aanu xeerku xaq u siinayn madaxa ciidanka ammaanku inuu ka reebidda ku tallaabsado, sida ay sheegtay Pia Gruvö, madaxa laanta ammaanka ee nidaamka IT-ga ciidammada nabad sugidda ee ciidanka difaaca oo magacooda loo soo gaabiyo, MUST.
Miyaan loo macneey-san kari si kale?
–May, waa mid cad oo waadix ah.
Iyada oo sidoo kale u barbar dhigtay fadeexaddii IT-ga ee hayadda hoggaanka gaadiidka:
Cidda keliya ee awoodda u leh in qaraarka laga tallaabsado waxay tahay dawladda, sida ay sheegtay Pia Gruvö.
Hase yeeshee aanay dawladdu go’aan noocaasi ah gaarin, sida ay madaxtooyadu u caddeeysay laamaha idaacadda ee Ekot iyo P4 Stockholm oo la xiriirey.
Madaxa ciidanka ammaanka Dan Eliasson ayaa ka gaabsaday in uu faallo ka bixiyo amuurtan.
Muddo toddobaadyo ah oo idaacaddu isku dayday inuu ciidanka ammaanku jawaab kabixiyo go’aan ka gaaridda qaraarka ayuu aakhirkii uu gelinkii dambe ee salaasadii ku daabacay boggiisa in aaney faallo ka bixineyn, iyada qoraal lagu sheegay:
”Ammaan ayaannu ku dareemeynaa in howlihii teknikada ee ciidanka ammaanka loo fuliyay hab xeerka taabac-san”.
Ciidanka ammaanka ayaa sidoo kale ka gaabsaday inuu ka jawaabo nooca ay tahay war-bixinta uu la wadaagay shirkadda CGI. Iyo sidoo kale nidaamka sireeynta ama koodeeynta oo uu u isticmaalay ee aan ahayn mid ay wasaaradda difaacu xaqiijisay.